Madaxweyne Farmaajo oo laga yaabo inuu ka baaqdo shirka Golaha Amniga ee Baydhabo | Jowhar Somali News Leader
Home SOMALI Madaxweyne Farmaajo oo laga yaabo inuu ka baaqdo shirka Golaha Amniga ee...
Madaxweyne Farmaajo oo laga yaabo inuu ka baaqdo shirka Golaha Amniga ee Baydhabo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa laga yaabaa inuu ka baaqdo shirka Golaha Amniga Qaranka ee Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, iyadoo Madaxweynuhu uu sii dheereystay safarkiisa Qatar oo markii hore qorshuhu ahaa labo cisho.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu magaalada Doxa sii joogayo, inta laga gaarayo shirka Madaxda Ururka Iskaashiga Islaamka oo maalinta jimcaha ka furmi doona magaalada Istanbul.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha intii Madaxweynaha dib ugu soo laaban lahaa Muqdisho uu go’aansaday inuu sii joogo magaalada Doxa, kaddibna u dhoofo dalka Turkiga oo uu kaga qeyb galayo shirka Madaxda Ururka iskaashiga Islaamka oo ah mid degdeg ah oo looga hadlayo xaalada magaalada barakeysan ee Qudus iyo Safaaradda Mareykanka ka furatay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Mursal oo hada ah Kusimaha Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu shirka Golaha Amniga Qaranka uu ka qeyb galo, isagoo maanta ku sii jeeda magaalada Baydhabo.
Lama oga in Madaxda maamul goboleedyada ay aqbali doonaan shirka Golaha Amniga Qaranka in Guddoomiyaha Baarlamaanka uu ku matalo Madaxweynaha, waxaana jira kala aragti duwanaan iyo khilaaf u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa shir uga socda Baydhabo, kaasoo aanay wali war murtiyeed ka soo saarin, waxaana shirkooda uu ahaa mid ka sii horeeyay shirka Golaha Amniga Qaranka oo horay loo iclaamiyay inuu Baydhabo ka dhaco dhamaadka bishii March, hase ahaatee khilaafkii Baarlamaanka uu u hakaday.
Previous articleMicheal Keating oo dalab u diray Madaxweynayaasha Puntland iyo Somaliland
Next articleWar murtiyeed laga soo saaray shirkii Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada (Akhriso)